Ny boky tsara indrindra momba ny Buddhism | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | kolontsaina
Buddhism, na dia heverina ho fivavahana aza, amiko dia rafitra filozofia, fomba fiaina iray. Mampianatra anao hino ny tenanao izy io, manome anao lakile hitondranao fiainana milamina sy sambatra. Amin'ity manokana ity dia hanolotra andian-dahatsoratra aho boky momba ny bodisma hahafahanao hahafantatra hoe inona no misy an'io filozofia ankehitriny io sy ny fomba hanampiany anao.
Eny, Iza no mbola tsy nanontany tena hoe 'iza aho?', 'Ho aiza aho?', 'Ho aiza aho?' Izy ireo no fanontaniana, eny, miaraka amina litera lehibe izay anontanian'ny olombelona tsirairay avy ny tenany indraindray, indrindra rehefa ao anaty krizy misy tanteraka izy.
1 Ny boky tsara indrindra momba ny bodisma
2 Ny fanontanian'i Milinda
3 Inona no nampianarin'i Buddha
4 Ny fon'ny fampianaran'ny Buddha
5 Buddha, ny fiainany ary ny fampianarany
7 Ny fahendren'ny fo: torolàlana ho an'ny fampianarana iraisam-pirenena momba ny psikolojia bodista
Ny boky tsara indrindra momba ny bodisma
Ao anatin'ny tontolo miha tandrefana, impiry ianao no nahatsapa na nieritreritra fa toa nanalavitra loatra ny natiora isika? Tsy miresaka fotsiny aho hoe mihamaro ny olona efa mipetraka amin'ny tanàna noho ny amin'ny tanàna, fa koa izany miaina fiainana isika izay, amin'ny fotoana maro, dia tsy mahasambatra antsika.
Hatramin'ny fahazazany dia nilaza taminay izy ireo fa tsy maintsy mianatra mba hahazoana asa izay hanome antsika filaminana ary, rehefa tratra, dia ho faly isika. Fa ... olona firy no fantatrao fa faly amin'ny asany? Vitsy, marina?
Ny sasany dia hilaza fa sarotra be ny manova ny fiainanao, izay marina amin'ny ankamaroan'ny tranga. Na dia tsy azo atao aza izany. Amin'ny Buddhism dia mianatra zavatra maro ianao, ary ny iray amin'izy ireo dia ny mitsahatra tsy hino an'izay nolazain'ny hafa taminao momba izay tokony hataonao ary tsy tokony hataonao amin'ny fiainanao. Ny fiainanao namako no anao, ary ianao irery ihany no tokony hanapa-kevitra amin'izany. Buddha nilaza hoe: afaka manova ny fiainanao ianao, tsy ilaina ny mino.
Noho io antony io sy antony hafa dia maro ny olona mieritreritra an-tsoratra sy mandamina ny diany mankany Atsinanana ho toy ny traikefa fanombohana. Misy ny sasany mandeha satria liana fotsiny izy ireo, fa ho azy rehetra, Ireto boky ireto dia ampirisihina mafy:
Ny fanontanian'i Milinda
Ity lahatsoratra ity, na dia tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i Kristy aza. C., natontan'ny mpanonta Boky vaovao miaraka amin'ny fanamarihana ny Lucia Carro Marina. Mora sy mahafinaritra ny famakiana azy satria izy io dia namboarina mifototra amin'ny fanontaniana sy valiny izay niresahana ireo olana lalina toy ny fahaveloman'ny tena aorian'ny fahafatesany. Mahagaga ankehitriny raha heverintsika fa nosoratana roa arivo taona lasa izay.
Inona no nampianarin'i Buddha
Nosoratan'i Walpola rahula ary natontan'i Espaniôla tamin'ny Kier. Mety ho boky mitombina sy lalina loatra izany, saingy ilaina amin'ny fifandraisana voalohany amin'ny filozofia bodista. Tsy iray amin'ireo famakiana maivana hoentina eny amoron-dranomasina ireo fa hanampy antsika hisokatra amin'ny tenantsika amin'ny tontolo vaovao sy mahavariana ity.
Ny fon'ny fampianaran'ny Buddha
Ny tompony dia nanoratra ny boky Thich Nhat Hanh, ary natontan'i Oniro tamin'ny 2005. Famerenana ireo lafin-javatra lehibe amin'ny Buddhism fa tsy matevina toy ny teo aloha. Ho an'ny mpanoratra, ny fotopampianarana bodista dia fintinina ao amin'ny fahamarinana efatra lehibe: ny fijaliana, ny antony mahatonga ny fijaliana, ny fanjavonan'ny fijaliana ary ny lalana mankany amin'ny famongorana ny fijaliana.
Buddha, ny fiainany ary ny fampianarany
Mpanoratra filozofa, mystika ary mpitarika ara-panahy Osho, ary natontan'i Gaia Editions. Iray amin'ireo boky ireo izay manoro hevitra anao ny hamaky kely isan'andro, satria azo atao tsara ny mianatra zavatra avy amin'ny pejiny rehetra. Saingy boky hafa somary hafa izy io, satria tsy milaza aminao izay tokony hatao izy io, fa ireo "lesona" ireo dia mila miaina ny tenanao mba hahatakaranao azy ireo. Mazava ho azy fa manome anao ny famantarana ilaina azy io.
Mba hahatakarana ny Bodisma, dia tsy afaka tsy hahita boky momba an'i Siddhartha ianao, izay ilay anarana nananany talohan'ny niantsoana azy hoe Bouddha. Betsaka ny mpanoratra efa niresaka momba an'io, fa hanome ny bokin'i Hermann Hesse, izay natontan'ny mpanonta fanao am-paosy. Ao amin'ny pejiny, nitantara ny fiainan'i Buddha ny mpanoratra, oviana ary ahoana no nahitany fanaintainana, fahanterana, fahafatesana, ary ny fihetsiny avy eo, namela ny rendrarendra rehetra nananany hanomboka fiainana hafa tanteraka.
Ny fahendren'ny fo: torolàlana ho an'ny fampianarana iraisam-pirenena momba ny psikolojia bodista
Ity dia boky natokana indrindra ho an'ireo izay manao fanazaran-tena na maniry hanomboka hampihatra fisaintsainana, ary koa ho an'ny psikology sy ny matihanina amin'ny sehatry ny fahasalamana ara-tsaina. Mpanoratra Jack kornfield ary natontan'i Ny Hare March, milaza amintsika ny andiana kaonty momba ny fanaony psychotherapeutika ny mpanoratra, ary koa ny saripika sy tantaran'ireo mpampianatra bodista niara-niasa taminy.
Betsaka ny boky momba ny bodisma, fa amin'ireo enina ireo dia tsy ho afa-milentika anaty rafitra filozofika mahaliana fotsiny ianao, fa azo antoka koa fa ho hitanao ny valin'ny Fanontaniana, na farafaharatsiny, amin'ny fomba tokony hanaraka hahitana azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Ny boky tsara indrindra hahazoana ny Buddhism
Ento mankany amin'ny morontsiraka ny alikanao